အိပ်မက်စစ်မှန်တဲ့လာမမူစေခြင်းငှါဘယ်လိုနေသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ကျွန်မငယ်စဉ်ကလေးဘဝကိုယုံကြည်ရာတစျခုနိမိတ်ကိုငါသိ၏။ မကောင်းတဲ့အိပ်မက်မှစစ်မှန်တဲ့လာတော့မှပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ညစာစားရန်တစ်စုံတစ်ဦးကပြောပြရန်လိုအပ်ပါသည်။ ငါ method ကိုမှန်ကန်ပုံကိုသိပေမယ့်အရမ်းဆိုးအိပ်မက်ဆိုးလျှင်အစဉ်အမြဲသူတို့ကိုအသုံးချရုံကိစ္စတွင်။ ))))) မရ
ကျွန်ုပ်တို့၏အကွီးအကဲမြားသူမကောင်းတဲ့အိပ်မက်ကိုမြင်သောအခါ, မည်သူမဆိုကပြောပြနှင့်တိတ်တဆိတ်ရေပြေးကိုသွား (သင်ရေချိုးခန်းထဲမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်သော့ခတ်နှင့်ရေထိန်းထားနိုင်တယ်) နှင့်အိပ်မက်မြင်ကြ shpotom ပြောပြဘူးဟုဆိုကြသည်။ ပြီးတော့သူသွားမလာခဲ့ပါဘူး။
သူတို့ Choteau စစ်မှန်တဲ့လာ, မ) မကောင်းတဲ့မဟုတ်သလိုကောင်းသောဘယ်တော့မှပြီးတာနဲ့))
သငျသညျရှိခဲ့ပါလျှင်ကောင်းတစ်ဦးညဥ့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းမရှိ, သငျသညျသူစစ်မှန်တဲ့လာအံ့သောငှါကြောက်နေကြတယ်။ ဒါဟာမှန်တိုက်ရိုက်ထို့နောက် (သင်လမ်းပေါ်တွင်သင်၏အိပ်စက်ခြင်းထုတ်ပယ်ကြောင်း) ရုံပြတင်းပေါက်ကနေကြည့်အိပ်ရာထဲကရတဲ့ရမည်ဖြစ်သည်။ မှန်၌သင်တို့ကိုသူ့မျက်စိမှာ (သင်အိပ်မက်ကမ္ဘာကိုပြန်လာဦးမည်အကြောင်း, အိပ်စက်ခြင်း၏အကြွင်းအကျန်က) မိနစ်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုကြည့်ဖို့ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဘိုးဘေးထိုသူအပေါင်းတို့သည်သေးငယ်တဲ့မှန်ခဲ့ကြီးမားသောမှန်ရှိခဲ့သည်ပင်အခါ, ကိုပြု၏။
ကိုယ့်ပြတင်းပေါက်ထွက်ကြည့်ဘယ်မှာရှိညဥ့်အိပ်ငါ့ကိုပြောပြပါ, အဘယ်သူမျှမစကားပြောအတူ tak prosnshsya ကြား၏။ တစ်ဦးက esch ငါ့ကိုချက်ချင်းအဖြစ်မကြာမီနှိုးအဖြစ်အိပ်မက်သည်လူကိုပြောပြကူညီပေးသည်, အစားအစာမစားခြင်းမရှိဘဲလျက်နှင့်မရေမသောက်ဘဲ, အတိအကျသွားလာသျောလညျးသငျပွညျ့စုံလာချင်လျှင်, ရှိသမျှအတိအကျဆန့်ကျင်ဘက်မလုပ်ကြပါဘူး။
ကောင်းပြီ, ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်အိပ်မက် Quote သည်မှန်လျှင်, လက်၌မိမိကိုယျကိုယူရမည်, durnoyquot; အိပ်မက်မက်။ ဟုတ်ကဲ့အားလုံးအိပ်မက်ကောင်းသောအိပ်မက်နှင့်မဆိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်သို့မဟုတ်မျက်ရည်စေသောအိပ်မက်ကြိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့အိပ်မက်အကြောင်းကိုအဘယ်အရာကိုတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်မေ့လျော့ဖို့ရိုးရိုးပါပဲ။ ထိုအကအကြောင်းတစ်စုံတစ်ဦးကမှမပြောကြဘူး။ ကိုယ့်ကိုသူတို့ဒဏ်ငွေဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်, မိသားစုနှင့်ချစ်ရသူနှင့်အတူဖုန်းကိုရန်လိုအပ်သည်။
Говорят надо помолиться Богини Ночи Гекате и Богине дня Никте, Богиня Геката покровительница ночи, а Никта — дня. Гекату попросить чтоб сон плохой не сбылся, а Никту об удаче дня. А еще говорят что с утра нужно солевой водой ополоснуться, и как говорили выше. никому о сне не говорить.
ဒါဟာ Quote ပြောအိပ်ရာထဲကရတဲ့မ, နံနက်ယံ၌ဖြစ်သင့်သည်, အဘယ်မှာရှိညဉ့်ရှိများနှင့် sonquot; ။ ကျွန်မအိပ်မက်တွေကိုကွပ်မျက်အတွက်, ဒါပေမယ့် Quote ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်မယုံကြည်ကြဘူးပေမယ့်; uzhastikovquot; အိပ်ပျော်အတွက်, နံနက်ယံ၌ငါပြောဆိုရန်ရှိသည်။
Если приснился нехороший сон, то, конечно, не хочется, чтобы он сбывался. Именно поэтому мне говорили, что такой сон до обеда никому рассказывать нельзя. А после обеда — хотите рассказывайте, а хотите — не рассказывайте.
Наше внутреннее настроение перед засыпанием определяет наш сон и то, что нам приснится. Если перестроиться на позитивный лад, а также понять на какие наши ошибки указывает этот сон, то совсем необязательно ему сбываться. Сон — это то, что у нас в душе — изменится состояние души — изменится и реальность, а сон — это просто подсказка подсознания, в каком направлении нужно действовать.
အဖွားငါ့ကိုဒီအဆုံးမသွန်သင်: သင်ပြီးတော့လျှော်ရှိရာအဲဒီမှာညဥ့်အိပ်ပြောပြရန်ပြတင်းပေါက်သို့ သွား. သုံးကြိမ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီပွိုင့်အထိအဘယ်သူမျှမပြောဆိုမ။
သင်တစ်ဦးမကောင်းတဲ့အိပ်မက်ကိုမြင်မက်လျှင်, သင်ချက်ချင်းအလွန်အရေးပါမှု attach နှင့်တစ်ဦးကိုချက်ချင်းထိတ်လန့်ထဲသို့ကျဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ အဘယ်သူမျှမထိခိုက်စေမည်မဟုတ်နိုင်အောင်, နံနက်ယံ၌ထရနှင့်ရေချိုးခန်းသို့သွားပိတ်ပစ်။ ရေပေါ်မှာ Turn နှင့်သင့်အိပ်ပျော်ခြင်းပြောပြပါ။ ထိုအခါမကောင်းတဲ့အိပ်မက်စစ်မှန်တဲ့လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ထိုအခါမကောင်းတဲ့အိပ်မက်၏အကောင်းဆုံးမည်သူမဆိုမှစစ်မှန်တဲ့လာဖို့မသူ့ကိုမပြောဘူး။
အကြှနျုပျ၏အဖွားနိုင်ရန်အတွက်သွန်သင် မကောင်းတဲ့အိပ်မက်မှစစ်မှန်တဲ့မလာဘဲ သင်ပထမဦးဆုံးသို့မဟုတ်သူအိပ်မက် retell နှင့်ဒုတိယအရှိရာအဲဒီမှာညဥ့်အိပ်ပြောပြရန်ပြတင်းပေါက်သှားဖို့မဟုတျပါဘူး, ရမည်ဖြစ်သည်။ အိပ်ပျော်ပြီးနောက်စစ်မှန်သောမလာသင့်ပါတယ်။
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,307 စက္ကန့်ကျော် Generate ။